हराएको भनिएको नेपाल-चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर पिल्लर भेटियो – SaipalNews.com
हराएको भनिएको नेपाल-चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर पिल्लर भेटियो
काठमाडौं ८ असोज । लामो समयदेखि हराएको भनिएको नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर सीमास्तम्भ भेटिएको छ । नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाका अनुसार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार स्तम्भ भेट्टाएको हो ।
सीमामा पर्ने लाप्चा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रुपमा ९ वटा भवन बनाएको सार्वजनिक भएपछि सो भूमिको निर्क्यौल गर्न नेपाली पक्षले पिल्लरको खोजीलाई तीव्र बनाएको थियो । अध्यक्ष लामाका अनुसार सीमास्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका–६ को टाकुलेमा हिउँ र माटोले पुरिएको अवस्थामा स्तम्भ भेटिएको हो ।
लाप्चामा रहेको १२ नम्बर स्तम्भ नजिकै ललुङजोङमा चीनले संरचना निर्माण गरेपछि आइतबार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र जनप्रतिनिधिको टोली सीमा निरीक्षण तथा पिल्लर खोज्न हिँडेको थियो । चिनियाँ पक्षले बनाएको भवनहरु हेरेर सोमवार फर्किएका थिए ।
करिब पाँच वर्षदेखि हराएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ हिउँ र माटोले पुरिएको अवस्थामा स्तम्भ भेटिएको लामाले जानकारी दिनुभयो । सीमास्तम्भ भेटिएपछि अब रेखांकन गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । सीमास्तम्भ भेटिए पनि चिनियाँ पक्षले बनाएको भवन कहाँ पर्छ भन्ने निर्क्यौल जिल्लाको टोली फर्किएपछि थाहा हुने जानकारी दिनुभयो ।
पिलर हराएको मौका छापी लिमीको लाप्चामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चिनियाँ पक्षले भवन निमाणको गरेको लिमीका स्थानीयबासिले दाबि गर्दै आएका छन् । सीमा निरीक्षण तथा पिल्लर खोज्न हिँडेका टोलीलाई चिनियाँ पक्षले आफ्नै भूमि भएको दाबी गरेको थियो ।
लकडाउन ! लाखौँ दुग्धजन्य पदार्थ बिग्रियो
दलीय भर्तीकेन्द्र बने विश्वविद्यालय !
रामवीरलाई कार्यकर्ताको प्रश्न, राजीनामा किन दिएको?
उपत्यका भित्रिदै खसी बोका च्याङग्रा
सूचना महामार्ग: कसरी हुँदैछ ढिलाइको शिकार
यसरी सडकले जोडिँदै छ नेपाल-सिक्किम
एक हप्तासम्म भारत नजान सुदूरपश्चिम सरकारको आग्रह
धनगढीमा सडक निर्माणका लागि सम्झौता